Yeyiphi imisebenzi onokukhetha kuyo abaneminyaka eli-16 ubudala? - Ulutsha Umsebenzi
Ukuzalelwa Kwaye Ukuzalwanolawulo
Ingca Ne Ornamental Grass
Ubugcisa Imiboniso Yesilayidi
Yeyiphi imisebenzi onokukhetha kuyo abaneminyaka eli-16 ubudala?
Imisebenzi yabantwana abaneminyaka eyi-16 inokufumaneka kumashishini endawo; Nangona kunjalo, ulutsha oluninzi lunokukhetha ukuzenzela umsebenzi xa lulungele ukuqala ukufumana imali. Sebenzisa ubuchule obuncinci kunokukhokelela kulithuba olwanelisayo okanye olunengeniso yengqesho kuba zininzi izinto onokuzenza ukufumana imali, ukugcina ikholeji, okanye ukufaka isandla kwiindleko zosapho lwakho.
Imisebenzi yeXesha leXesha eliQeshayo kwi-16
Imisebenzi yolutsha yesintu lukhetho olufanelekileyo kwabo balulungeleyo ukujoyina abasebenzi. Ezinye zeendawo ezidumileyo zidweliswe apha ngezantsi.
Amanqanaba okufikisa kubafana
Imifanekiso yokwenene yoLutsha yoBomi bemihla ngemihla
Izimvo zasebusuku eziphezulu
Ivenkile yokutya iBagger / iCashier / iStocker
Iivenkile ezininzi zokutya zinemisebenzi yabantwana abaneminyaka eli-16 ubudala abakulungeleyo ukuphatha ibhegi kunye nokubonelela ngenkonzo yabathengi. Lo ngumsebenzi ofanele ukuqwalaselwa ukuba uyathanda ukujongana nabantu. Ezinye zezi venkile zinokuqesha abaneminyaka eli-16 ubudala ukufumana izikhundla zecashier kunye nesitokhwe. Kuya kufuneka ujonge kwinkampani ethile onomdla kuyo.
Iivenkile zokutya Umshicileli kwaye HEBE unikeze izikhundla kubantwana abaneminyaka eli-16 ubudala.
Ivenkile yokuGcina iCashier
Ezinye iinkampani zikulungele ukuthemba abaneminyaka eli-16 ubudala ngemisebenzi yokufumana imali. Ezi ntlobo zemisebenzi zifumaneka kwiivenkile zesebe, abathengisi abakhulu abanjengoWal-Mart okanye iivenkile ezinkulu. Kuya kufuneka ukhululeke kwizibalo ezisisiseko ngaphambi kokufaka isicelo sale misebenzi.
Macy's , Ithagethi , kunye JCPenney Bonke banokuqesha abaneminyaka eli-16 ubudala kwizikhundla zecashier okanye kwizikhundla zesitokhwe; oku kuyakuxhomekeka kwisebe elithile levenkile, kwimithetho yezabasebenzi, nakwinqanaba lokukhula kolutsha.
Indawo yokutyela uCashier / Umpheki / Umlindi
Iindawo zokutyela zihlala ziindawo eziqesha abaneminyaka eli-16 okanye eli-17 ubudala. Ulutsha oluninzi luqala iminyaka yalo yokusebenza kwiivenkile zokutyela, rhoqo kwiindawo zokutya ezikhawulezayo. Kwivenkile yokutyela efana McDonald's okanye Indlela engaphantsi , ungasebenza njengecashier okanye ukulungiselela ukutya. Kwiivenkile zokutyela ezinomtsalane, unokusebenza njengomntu ococa iitafile okanye njengomatshini wokuhlamba izitya. Ngamanye amaxesha umntu oneminyaka eli-16 ubudala unokuba yiweyitala okanye uweta, kodwa uhlala ufuna ukuba neminyaka embalwa ukuze ufumane le misebenzi.
Nazi iindawo ezimbalwa zokutyela eziqesha abaneminyaka eli-16 ubudala, kuxhomekeke kwindawo ethile kunye nemithetho yelizwe:
Indawo yokutyela yeBJ kunye neBrewhouse
UMsebenzi oShishinayo oMncinci
Kulabo bafuna ukwazi ukuba amashishini asebenza njani ngenene, cinga ngokunceda umnini-shishini elincinci. Isibonelelo sokusebenza kwinkampani encinci kukuba unokuba nemisebenzi eyahlukeneyo kunye namathuba okufunda ngelixa usamkela imali. Ukufumana ukuthembela kunye nembeko yomnini kungakhokelela kuxanduva ngakumbi kunye namathuba ngokuhamba kwexesha.
Khangelakwiinkampani zasekhaya zifumane amathuba. Ukusebenzisa ilizwi ngomlomo kunokukuxwayisa ngamathuba emisebenzi edolophini.
UMncedisi weThala leencwadi
Ithala leencwadi libonelela ngendawo yokusebenza elungileyo kulutsha. Icocekile, ngaphakathi kwaye noxinzelelo olusezantsi. Awuyi kuba nonxibelelwano oluninzi ekuhlaleni, nangona ngamanye amaxesha abathengi baya kukucela uncedo. Ukuba uyazonwabela iincwadi kwaye ucwangcisiwe, lo msebenzi mkhulu ukuba ungafumana enye. Cela ulwazi kwithala leencwadi lengingqi yakho ngendlela onokuthi ufake ngayo isicelo xa undwendwela kwixesha elizayo.
Ngaba amakhandlela amhlophe atshisa ngokukhawuleza kunamakhandlela anemibala
Unokujonga kwakhona kwi-Intanethi kwimisebenzi enokwenzeka yamathala eencwadi.
Ukuba uhlala esixekweni esivumela ukuba ufumane iphepha-mvume lakho xa uneminyaka eli-16, unokufaka isicelo sokuhambisa ukutya. Lo msebenzi ungakuvumela ukuba usebenze ngokuhlwa nangeempelaveki. Kuya kufuneka ukwazi ukufumana iingcebiso malunga nenkonzo yakho.
Uninzi lwamatyathanga esizwe lufuna ukuba ube neminyaka eli-18 ngaphambi kokuba ufumane umsebenzi wokuqhuba. Nangona kunjalo, iindawo zokutyela zalapha ekhaya zinokuvumela abaneminyaka eli-16 ubudala ukuba bahambise. Ndwendwela ezinye iivenkile zokutyela ukuze ufumanise ukuba bayaqesha na.
Unobhala Wongeniso lweDatha
Ukuba unezakhono ezisisiseko zekhompyuter kwaye uthanda ukusebenza eofisini, unokuhlala ufumana umsebenzi wesingxungxo njengomabhalana wedatha. Iiofisi ezininzi zisenokufuna oomabhalane abanjengeebhanki, iiofisi zonyango, iifemu zokwenza ingxelo, okanye amanye amashishini amancinci.
Amathuba oShishino lwabaneminyaka eli-16 ubudala
Kuwo wonke lo msebenzi, kufuneka ubonakale ukuze uqalise. Okokuqala, kufuneka usasaze igama phakathi kwabo ufunda nabo, amalungu ecawa, okanye abamelwane. Unokwazi ukuthumela intengiso kwi-Intanethi okanye uthumele iiflaya kwivenkile yokutya okanye ecaweni. Ukuze ukhuseleke, kufuneka uvumele abazali bakho ukuba bakuncede ujonge abathengi abanokubakho.
Iinkonzo zengca kunye neegadi
Ulutsha oluninzi lufumana imali ehlotyeni ngokucheba ingca nokwenza imisebenzi yegadi. Ukuba unako ukubonelela ngezixhobo zakho unako ukufumana umsebenzi omninzi. Zama ukudibanisa abathengi ngaphambi kokuba ihlobo liqale ukuqala kukhuphiswano.
Ukuba ungumfundi olungileyo onomdla wokunceda abantu, unokukwazi ukwenza imali njengomkhapheli. Ezona zifundo zixhaphakileyo ulutsha olufuna uncedo kuzo ziimathematika, isayensi, isiNgesi neelwimi zangaphandle. Qiniseka ukuba uhlola abaxhasi bakho- abazali bakho banokufuna ukukunceda uqiniseke ukuba abo banokuba ngabathengi ngabo bathi bangabo.
Ukuba uthanda izinja,ukuhamba ngenjaingangumsebenzi olungileyo kuwe. Yazisa abantu kwindawo ohlala kuyo ukuba ufuna amathuba okufumana imali eyongezelelweyo ngokubonelela ngolu hlobo lokhathalelo lwezilwanyana. Ukuba uthembekile kwaye unokuthenjwa, usenokukwazi ukufumana abathengi abathile abaza kukuvumela ukuba uhambe nenja yabo yonke imihla kunye nabanye abaya kujongana neenkonzo zakho xa beshiya iholide. Ukuba wenza umsebenzi olungileyo, uya kutsala abathengi abongezelelweyo ngokudluliselwa.
Car yomsuki weengubo
Ukuhlamba iimoto yenye inkcubekoUmsebenzi wasehlotyenikubantwana abaneminyaka eli-16 ubudala, nangona kunokuba lula ukuba ibe lishishini eliqhubekayo lolutsha. Yazisa wonke umntu okummandla wakho ukuba uzimisele kwaye uyakwazi ukuhlamba iimoto unyaka wonke ukuze ufumane imali ethe xhaxhe.
Ukugcina umntwana ngomnye wemisebenzi elula kulutsha ukuyifumana. Into oyifunayo lidumela elihle, ukuthembeka, ukufumaneka, kwaye mhlawumbi ngumzali oya kuthi aqinisekise ukukhula kwakho. Inokuba yindlela elungileyo yokwenza imali eyongezelelweyo ngelixa ungabotshelelwa kwishedyuli yomsebenzi weveki.
Utitshala woMculo / uTutor
Ukuba udlala isixhobo, unokukwazi ukufundisa abantwana kunye nabantu abadala. Nxibelelana nabantu abanomdla ngesikolo sakho okanye ngecawa yakho. Apho ufundisa khona izifundo kuxhomekeke kuhlobo lwesixhobo osidlalayo; cinga ukuzama ukuseta ubudlelwane kunye nesikolo okanye icawe ukuze usebenzise izixhobo zabo ukuba ufuna indawo yokufundisa.
Umntu wokuncedisa wena
Ngokuhamba ngokukhawuleza kobomi bethu, baninzi abantu abanokuthanda ukufumana uncedo olusebenzayo. Ukuba unoxanduva kwaye uyakonwabela ukuhambisa imiyalezo, ukwenza umsebenzi wasekhaya, okanye eminye imisebenzi engaqhelekanga, unokufumana umsebenzi njengomncedisi. Beka iiflaya kwiindawo ezityebileyo zedolophu okanye usebenzise igama lomlomo ukufumana igama lakho phaya. Kwakhona, khathalela usapho ngononophelo ngaphambi kokwamkela lo msebenzi.
I-pittsburgh ye-ultra advanced ibala kunye nokuphononongwa okutywinayo
IWebhu okanye uMyili wemizobo
Ukuba sele uchitha lonke ixesha lasimahla kwikhompyuter yakho, kutheni ungaguquli izakhono zakho zibe yimali? Iinkampani ezininzi kunye nabantu banesidingo sokwenza okanye ukuphucula iiwebhusayithi zabo. Qala ngokwenza iwebhusayithi yakho ukubhengeza izakhono zakho. Ke, ngalo lonke ixesha ufumana iwebhusayithi enokusebenzisa iinkonzo zakho, nxibelelana kwaye uzithengise kunye nemibono yakho.
Blogger / Umbhali
Ukuba unendlela enamagama kwaye unolwazi ngesihloko, unokwenza imalikublogaokanye ukubhala. Cinga ngokujoyina inethiwekhi yokubhloga eya kuthi ibonelele ngomvuzo oqinisekisiweyo weposi nganye okanye isabelo sengeniso yentengiso. Qiniseka ukuba uphonononge izikhokelo ngokusondeleyo ngaphambi kokuba ujoyine isiza sokwabelana ngeblog, njengoko abanye bafuna abo banegalelo ukuba babe neminyaka eli-18 ubudala okanye ngaphezulu.
Ukuba ukhetha ukuba nolawulo ngakumbi kwaye ufumane yonke ingeniso yentengiso, emva koko yenza ibhlog yakho Blogger.com okanye WordPress.com kwaye uzisebenzele. Ungabhalisela iAdSense okanye ukhuthaze iimveliso kwindawo yakho. Kuya kufuneka umzali wakho abhalisele iiakhawunti zentengiso kuba awukafiki kwi-18.
Abantu abaninzi abadala bakufumanisa kunzima ukuhamba, ngakumbi kwimozulu engentle. Bonelela inkampani kubantu abadala abangamalolo ngokuwisa ukudlala amakhadi okanyeImidlalo yebhodikanye ngeveki. Nceda iqela labahlobo abaphezulu bahlangane ngokubakhwelisa ukuya nokubuya kwindawo yokuhlanganisana ukuya kudlala imidlalo okanye ukuya nokusuka kwimisitho yabantu abadala ebanjwe yimibutho yasekuhlaleni. Khangela umsebenzi noomawokhulu bakho kunye nabahlobo babo okanye ujonge kwiiarhente zabemi abaphezulu ukuze ubhengeze izakhono zakho.
Phuma uye kwiivenkile ezithengisayo kunye nentengiso yeeyadi ukuze ufumane izinto onokuzilungisa okanye uzicoce emva koko uthengise kwakhona. Joyina amaqela kuFacebook okanye wenze iakhawunti kwindawo yokuthengisa kwakhona eBay ukuthengisa izinto zakho ezibuyiswe ngokutsha. Jonga izinto ezinesibheno esikhulu ezingayi kuthatha ixesha elide ukuzilungisa kwaye ungazithengela ngexabiso eliphantsi. Iziqwenga zefanitshala ezincinci kunye nemifanekiso yakudala okanye iifreyimu zeefestile kulula ukuzicoca, ukupeyinta, kunye nokuyila kwakhona ukwenza izinto ezonwabisayo, ezisebenzayo zokuhombisa ekhaya. Ukuba unobugcisa obuninzi, khangela iziqwenga ongazisebenzisa ukwenza ubugcisa obufumanekayo.
Abanye abantwana kunye nolutsha benza ubomi kunye naboYoutubeitshaneli. Nje ukuba wenze oku kulandelayo ungasayinela isixhobo sentengiso esikwi-Intanethi ukwenza imali ngejelo lakho okanye ujonge abaxhasi abahlawulwayo. Ukuba ufumana ukulandela okukhulu ngokwaneleyo kwaye uneqonga elahlukileyo onokuthi uqhubeke ngalo ukuze uhlawulelwe ukubonakala koluntu. Qala ngokujonga ukuba yintoni Ulutsha lweTubers zezona ziphumelele kakhulu. Emva koko uze nombono wokuqala oza kubhenela abaphulaphuli abaninzi. Cwangcisa iividiyo zakho kwangaphambili ukuze uzive ubuchwephesha ngakumbi kwaye ufumane igama malunga nephulo lakho elitsha.
Amaxesha onyaka kunye nehlobo lasehlotyeni elineminyaka eli-16 ubudala
Usenokungafuni ukusebenza unyaka wonke; mhlawumbi ukusebenza ehlotyeni okanye kwikhefu leKrisimesi kunokubonelela ngemali eyoneleyo yokuchitha. Kukho izikhundla ezininzi ezinokubakho xa umntu oneminyaka eli-16 ubudala ezinokufumana.
Ukusonga izipho zeKrisimesi kunokuba yindlela elungileyo yokufumana imali eyongezelelweyo ngexesha leeholide zasebusika. Uninzi lwale misebenzi lusezivenkileni okanye kwiivenkile ezinkulu. Qala ukukhangela amathuba kwangoko ekwindla, njengoko le misebenzi yonyaka ihlala izaliswa kakuhle phambi kwexesha leeholide.
Umsebenzi wePaki yoKonwabisa
Umsebenzi omnandi wasehlotyeni unokusebenza kwipaki yokonwabisa efana Iiflegi ezintandathu okanye Ulwandle . Unokusebenza kwindawo yetikiti, kwindawo yokuthengisa izinto ezinokuthengwa, okanye nanjengomntu osonwabisa epakini.
Kukho izikhundla ezininzi apho iihotele zinokuqesha umntu oneminyaka eli-16 ubudala-ngakumbi ngeli xesha lixakekileyo. Kwiindawo ezifudumeleyo, ixesha elixakekileyo lisenokuba sehlotyeni kodwa kwiindawo zokutyibilika ekhephini, oku kunokuba sebusika. I-Bellboy okanye umqeshwa wangaphambili wedesika zizikhundla eziqhelekileyo ezinokufumaneka kwezi ndawo zombini. Indawo yokutyela yehotele okanye ivenkile yezipho inokuba nezikhundla ezininzi ezivuliweyo.
Iihotele ezininzi zithi kufuneka ubeneminyaka eli-18 ubudala kodwa ukuba ubuza nomphathi, ungafumanisa ukuba ngenene zikhona izithuba okulungeleyo oko. Hlola kunye nehotele ngaphambi kokuba ixesha elixakekileyo liqale ukufumana isicelo kunye nokulinganisa ukufumaneka kwezikhundla.
Ngaba uyakwazi ukudada nokuhlangula abanye? Unokwazi ukuyisebenzisa le nto ukuze uqinisekiswe njengomsindisi ngexesha lasehlotyeni. Kuya kufuneka ujongane nabantwana abathanda rambunctious kwaye ube nakho ukubanga igunya lakho ukugcina ulawulo lwemeko echibini. Oku kudla ngokuba ngumsebenzi wexesha elithile; Nangona kunjalo, ukuba ufumana umsebenzi echibini langaphakathi okanye kwimozulu epholileyo, umsebenzi ungangunyaka wonke.
Xa ilixesha lokuvuna, iifama ezininzi zifuna umsebenzi wonyaka. Amanqaku olutsha lwaseMidwest luye lwachitha ixesha lasehlotyeni lisusa ingqolowa, umzekelo. Ukuba uhlala kwindawo enezolimo ezikufuphi, khangela amathuba angaphandle.
ndingayithengisa phi iigugu zam zegolide
Unokwazi ukubonelela ngeenkonzo zakho kubamelwane ebusika ukunceda ngokususwa kwekhephu ngqo. Okanye, qhagamshelana neenkonzo zokususa ikhephu ukuze ubone ukuba bayaqesha na; Uncedo lokusebenza nenkonzo akufuneki uthengise iinkonzo zakho.
Umncedisi wokhathalelo lwezilwanyana
Ukuba uyathanda ukusebenza nezilwanyana, jonga igig njengomncedisi womgcini kumyezo wezilwanyana. Unokwenza uninzi lokucoca indawo evaliweyo, kodwa uya kuba nethuba lokufunda malunga nokunxibelelana nabanye babagxeki abangenabungozi. Eminye imisebenzi onokucelwa ukuba uyenze ibandakanya ukupeyinta ubuso kunye nezilwanyana zezilwanyana nabantwana kumyezo wezilwanyana.
Kwezinye iintsapho, ukubeka kunye nokuthatha imihombiso yeholide kuvakala ngathi yinto ekhathazayo abanalo ixesha layo. Kulapho ungena khona. Nokuba yiKrisimesi, iHalloween okanye iPasika inikezela ukuhombisa ngaphakathi kunye / okanye ngaphandle kwamakhaya oxakekile ngemali encinci. Khangela abamelwane abadala okanye abazali abasebenzayo nabantwana njengabaxhasi bakho bokuqala. Sebenzisa imihombiso yabo kwaye unakekele iindawo ezinzima, ubashiyele ukuhombisa okulula ukwenza ukuba unqwenela.
Ukuba ulungile ekubhakeni kwaye amaqebengwana okuhombisa okanye iikeyiki unganakho ukuyiguqula ibe ngumsebenzi osecaleni onenzuzo. Nikezela ngokwenza iikeyiki zokuzalwa zabantwana okanye iidessert zezinye izehlo ezingaqhelekanga. Qala ngokwenza isibini sabahlobo simahla. Thatha imifanekiso yemveliso yakho egqityiweyo kwaye ufumane abahlobo bakho ukuba bakunike uphononongo kwimidiya yoluntu. Ukuba uphumelele, unokuvula idokodo kunye neempahla ezintsha ezibhakiweyo kwintengiso yamafama endawo.
Ukhe wawabona la mabali eendaba kaDisemba apho amasela ebe iipakethe kwiivaranda zabanye abantu, ngakumbi kufutshane neKrisimesi. Nceda abamelwane bakho bagcine izipho zabo zikhuselekile ngokunikezela ukuhambisa iipakethi zabo ngaphandle kwamehlo. Kuba unokubakho ekhaya uvela esikolweni iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba uninzi lwabantu abadala lusebenze, ungabeka iipakethi endlwini yabo okanye uzihambise kwiveranda yangasemva okanye kwigaraji, ngenxa yoko baphumile kumasela.
Kukho ezinye iiwebhusayithi ezijolise kwimisebenzi yexeshana kunye nexesha elizeleyo abanokuthi banomdla kulutsha.
Snagajob.com unemisebenzi emininzi yokuthengisa kunye nenkonzo kwaye unokukhangela ngekhodi ye-ZIP.
Abaselula.org Uluhlu lwemisebenzi kuphela yabantwana abaneminyaka eli-14 ukuya kweli-19 ubudala.
Icolela ayenzelwe ngokukodwa ulutsha; Nangona kunjalo, idwelisa imisebenzi efumanekayo kwiipaki zokuzonwabisa, iipaki zesizwe, kunye neminye imisebenzi yexesha elithile.
Yenza imali eyongezelelweyo kwaye ufumane amava axabisekileyo
Uninzi lwemisebenzi yolutsha yindlela nje yokufumana imali kunye nokufumana amava omsebenzi. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo umsebenzi olungele izakhono zakho, uhlobo lomntu, kunye namabhongo exesha elizayo. Nxibelelana nabaqeshi kwindawo ohlala kuyo ukuze ubuze malunga nokuvuleka kwemisebenzi ukuba ukulungele na ukuqala ukusebenza okanye wenze imilenze eyimfuneko ukuze uzenzele ishishini elincinci. Emva kwayo yonke loo nto, akukaze kusekuqaleni ukuqala ukulungiselela ikamva.
Cofa umfanekiso ukuze uthathe ipoll.
Indlela Yokuphila Ukukhulelwa Nokusebenza Imihla Yokuqala Umsele Malunga Incwadi Zabantwana
Umdaniso Ne Performance Costumes
Ezamahala Medical And Liability Rasease Forms
Iindidi Zoku Ukwenza
Iikhremu ezili-11 eziGqwesileyo zokuLwa ukuguga ngo-2021
Ukususa iphunga lomchamo kwiPuppy Fur
Ukuphela kwetafile enokhetho lweLamp
Umatshini wokuhlamba iimpahla weWisk
IiTattoos zabafazi ababhinqileyo
ngubani i-aquarius ehambelana kakhulu
Yimalini ukubhengezwa kwekati
zihlala ixesha elingakanani iintsholongwane ezibandayo ngokutya
ithatha ixesha elingakanani intlanzi ikhulelwe
amagama aqala ngonobumba x
ubhala njani obituary kumama
Iinkonzo Zematriki Citizen Services
Uxinzelelo Management Techniques